Nepal Drishya भीम रावलदेखि अष्टलक्ष्मीसम्मले छोडेपछि माधव नेपाल रोएकै हुन ?
Nepal Drishya १५ भदौ, २०७८ | 31 Aug, 2021
काठमाडौं/ एमालेबाट अलग भई नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाएका माधवकुमार नेपालको रोएको फोटोलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अनेकन टिकाटिप्णी भएका छन् । लामो समयदेखि आफूलाई साथ दिँदै आएका नेताहरुबाट धोका पाएर नेपाल रोएको भन्दै केही मिडियाले सामाचार समेत तयार पारेपछि एमालेभित्रको राजनीति थप तातेको छ । शनिबार ललितपुरमा पेशागत महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोलेको विषय र फोटो फरक पर्नेगरी समाचार बाहिर आएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पक्ष र विपक्षमा जोडतोडले लागेका छन् । एमाले विभाजनको आरोप खेपेका नेता नेपालमाथि भारी आलोचना समेत भइरहेको छ । यसबारे नेपाल तथ्यजाँच
NepalFactCheck.org ले के हो माधवकुमार नेपाल रुँदै गरेको भाइरल फोटोको वास्तविकता ? शीर्षक दिएर चिरफार समेत गरेको छ । हामीले पनि नेपाल तथ्यजाँच NepalFactCheck.org को सहयोगमा भिडियोसहित यो साम्रगी तयार पारेका छौं ।
माधव नेपाल रोएकै हुन ?
नेता नेपाल रोएकै हुन् । तर, ललितपुरमा होइन, सिंहदरबारमा ।
२०७६ साउन १९ गते बिहान सिंहदरबारस्थित संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसदहरूले बधाई दिएपछि बोल्ने क्रममा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भटराईको गला अवरुद्ध भएको थियो । नेता नेपाललाई गुरु मान्ने भट्टराईले समिति बैठकमा जब २०४३ सालको घट्ना स्मरण गरे माहोल झनै भावुक भएको थियो । आफू मृत्युको मुखमा पुगेको बेला नेता नेपालको एक स्पर्शले आफूलाई बाच्ने शक्ति प्रदान गरेको भट्टराईले सुनाएका थिए । योगेशले विगत सम्भाएपछि माधव नेपालका आँखा रसाएका थिए ।
२०४३ सालमा योगेशलाई भएको के थियो ?
२०४३ सालमा पार्टी कामले योगेश काठमाडौंमा खटिएका थिए । निर्वाचनको दौरानमा रहेका योगेश अत्यन्तै व्यस्त हुन पुगेँ । समय यस्तो आयो कि योगेशको खाने बस्नेको टुंगो भएन । त्यहीँ नै बेला योगेश एक्काशी बिरामी परे । बिरामीपछि टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएका योगेशको ६० दिनसम्ममा पनि कुनै सुधार आएन । भट्टराईकाअनुसार डाक्टरले बाँच्ने आशा समेत मारेका थिए । त्यहीँ समय नेपाल बिरामी योगेशलाई भेट्न टिचिङ पुगेका थिए । नेपालको एक स्पर्शले नै आफूलाई बाच्ने शक्ति प्रदान भएको योगेशले समितिको बैठकमा भावुक हुँदै सुनाएका थिए ।
ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा माधव नेपालले के भनेका थिए ?
शनिबार ललितपुरमा पेशागत महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता नेपालले विगतमा आफूलाई साथ दिँदै आएका नेताहरु भीमरावलदेखि अष्टलक्ष्मीसम्मलाई संकेत गर्दे "मलाई अगाडि घचेटे, पछाडि हेर्छु त कोही छैन" भनेका थिए । उनले आफू पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको स्पष्टिकरण दिँदै दोस्रो तहका नेताहरुकै कारणले अहिले अवस्थामा पुगेको बताएका थिए ।
अब हेर्नुस्, भिडियो
Published Date: १५ भदौ, २०७८ | 31 Aug, 2021